Dab xalay qabsaday suuq ku yaalla Baydhabo oo geystay khasaare hantiyeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dab xalay qabsaday suuq ku yaalla Baydhabo oo geystay khasaare hantiyeed
A warsame 10 April 2014 4 April 2019
Baydhabo – Mareeg.com: Dab xalay ka kacay qeyb ka mid ah suuqa magaalada Baydhabo ayaa khsasaare u geystay qaar ka mid ah ganacsatada suuqaas, sida uu warbaahinta u sheegay ganacsade lagu magacaabo Xuseen oo dukaankiisu dabkaas ku gubtay.
Dabka ayaa baabi’iyey ilaa 7 dukaan oo isugu jiray kuwa bagaasha iibiya iyo bakhaaro muuska lagu iibiyo, lamana garanayo sababta ka dambeysay dabkaan.
Gurmad xoog leh iyo dadaal badan oo ay dadku sameeyeen, ayna ka qeyb qaateen ilaa 3 booyadaha biyaha qaada ah kadib ayaa lagu guuleystay in la bakhtiiyo dabkaasi.
Dakbkaas ma geysan wax khasaare nafeed ah iyo dhaawac labadaba, waxaase halkaas dhibaato hatiyeed kasoo gaartay ganacsatdii dukaamadu ka gubteen.
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho ku tegay dalka Burundi